Faa’iidooyinka cabbista Saliid Saytuunta ee subaxda hore xili caloosha marantahay – Somali Integration Tv
Waxaa qoray Abdiaziz Hassan	 La dabacay Maanta Aug 25, 2018 0
(SITV-MUQDISHO):_Saliid Saytuunta waxaa ku jira faa’idooyin badan oo dhanka caafimaadka ah, kuwaas oo qaarkood maskaxda la yaab ku noqonayaan. Saliid saytuuntu waxa ay hodan ku tahay curiyeyaal nafaqo oo faa’idooyin badan iyo asiidho duxeed, faytamiinno, dufanno muhiim ah iyo maaddooyinka lidka ku ah mariidka. Maaddooyinkan ayaa dhammaantood ah kuwo ilaaliya caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga, kana hortaga burburka ku dhaca unugyada dhiigga cas. Waxa kale oo ay saliid saytuuntu leedahay faa’idada ah in ay miisaanka yarayso iyo in ay xanuunka iyo kaarka buka ama nabar ku dhacay yarayso.
Sida lagu sheegay warbixin uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda wararka ee Alcarabiya, xeeldheereyaasha caafimaadka cuntadu waa ay ku talinayaan in saliid saytuunta lagu daro cuntooyinka maalinlaha ah, gaar ahaan in la cuno xilliga caloosha aanay cunto hore ku jiro oo ah marka ay ugu habboon tahay in laga dheefo faa’idooyinkeeda dahabiga ah ee tirada badan. Marka aynu hoos ugu sii dhaadhacno faa’idooyinka caafimaad ee saliid Saytuunta waxaa ka mid ah:
Xiidmaha: Saliis saytuuntu waxa ay xoojisaa shaqada dheefshiidka iyo dhaqdhaqaaqa xiidmaha, waxa aanay ka hortagtaa caloos istaagga.
Maqaarka: Saliis Saytuuntu waxa ay u fiican tahay caafimaadka maqaarka iyo ciddiyaha, waxa aanay jilcisaa, wanaajisaa isla markaana dux siisaa timaha.
Beerka: Beerku waxa uu kaalin mug leh ka qaataa dhammana hawlaha nolosha qofku ku xidhan tahay ee jidhku qabto ama u baahdo. Waxa uu ka masuul yahay nadiifinta dhammaan xubnaha uurkujirta, sidaa awgeed waxaa muhiim ah in beerka mar kasta laga nadiifiyo suntan, sida ugu habboon ee uu qofku ku nadiifin karaana waa in uu isticmaalo saliid saytuunta.
Miisaanka: Saliid saytuunta waxaa ku jira xaddi badan oo ah asiidho duxeed, waana duxaha ugu fiican caafimaadka qofka, waxa kale oo ay saliid saytuuntu qofka ku beertaa dareen dhereg oo cuntada badan ka hor istaaga, dufanka kalastaroolka ahina kuma jiro, arrimahaasi waxa ay ka hortag u yihiin korodhka miisaanka, haddii la joogteeyana waa ay yareeyaan xaydha jidhka ku ururta.
Habdhiska difaaca: Asiidhada Amiino ee saliid Saytuunta ku jiraa waxa ay kaalin muhiim ah ka qaataan xoojinta habdhiska difaaca jidhka, taas ayaana sababta in ay kor u kacdo awoodda uu jidhku u leeyahay iska caabbinta cudurrada.
Wadnaha: Siyaabaha ugu fiican ee aad jidhkaaga ugu kordhin karto Kalastaroolka nooca faa’idada leh waa in aad isticmaasho saliid Saytuun, sida la ogyahayna Kalastaroolka faa’idada lihi waxa uu xoojiyaa caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga. Dhinaca kalana Saliid saytuuntu waxa ay yaraysaa Kalastaroolka dhibaatada keena.
Kaarjebin: Saliid saytuuntu waxa ay qofka u noqotaa kaarjebin dabiici ah. Cilmibaadhiso kala duwan ayaa lagu ogaaday in cabbista 3 ama 4 malqacadood oo saliid saytuun ahi ay la awood tahay dawada kaarjeibta ee Ibuprofen.
Macaanka: Saliid saytuuntu waxa ay caawisaa in ay yaraato sonkorta dhiiggu, sidaa awgeed ayaanay dhakhaatiirtu dadka macaanka qaba kula taliyaan in ay cunaan saliid saytuunta.
9 Maskaxda: Saliid Saytuuntu waxa ay xoojisaa caafimaadka maskaxda waxa aanay ka hortagtaa in fahamka iyo awoodda garasho ee maskaxdu hoos u dhacaan marka uu qofku weynaado. Waxa kale oo ay saliidda Saytuuntu xoojisaa xusuusta iyada oo ka hortag fiicanna u ah xaaladaha nafsiga ah ee qulubku ka mid yahay.
Xigasho: Goos-gooska Geeska
Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga dalka oo kormeer shaqo ku tagay Cisbitaalka Xoogga+Sawirro